दसैं अफर ३ लाख पर्ने मोटरसाइकल अब १.५ लाखमै : यी हुन् २ लाख पनि नपर्ने मोटरसाइकलहरु ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दसैं अफर ३ लाख पर्ने मोटरसाइकल अब १.५ लाखमै : यी हुन् २ लाख पनि नपर्ने मोटरसाइकलहरु !
अहिले उहाँ सार्वजनिक बसबाटै आवतजावत गर्नुहुन्छ । अहिले एकातिर सार्वजनिक सवारीसाधन कम चलेका छन् भने अर्कातिर सङ्क्रमणको जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “बिहान साँझमा त अझै बसमा पनि भीडभाड हुने गर्छ ।” विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको को,भि,ड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सार्वजनिक यातायात कहिले बन्द त कहिले जोर÷बिजोरमा सञ्चालन गर्दा निजी सवारीसाधनप्रति नागरिकको आकर्षण बढिरहेको छ ।